Fisandohana sy fakana vola :: Pasitera sy olona dimy voarohirohy tamin'ny fisolokiana • AoRaha
Fisandohana sy fakana vola Pasitera sy olona dimy voarohirohy tamin’ny fisolokiana
Voasaringotra amin’ny raharaha fisandohana andrai­kitra, fakàna vola tsy ara-drariny sy fisolokiana ny olona enina nosamborin’ny polisy, tamin’ny zoma sy sabotsy lasa teo. Pasitera amina fiangonana zandriny ny iray amin’izy ireo, araka ny nambaran’ny mpanao famotorana.
Mpiray fiangonana sy misy rohim-pihavanana kosa ny sasany. Samy voatazona natao famotorana teny amin’ny polisy ekonomika, etsy Anosy, ireto voarohirohy.
Saika very volabe tamina fisolokiana ny vehivavy iray, lehibena fiangonana zandriny iray eto an-drenivohitra. Nisy raharaha nilàna azy teny amin’ny sampandraharaha miady amin’ny kolikoly, tamin’ny volana septambra lasa teo. Tamin’izany indrindra no nisy lehilahy iray nanatona azy sy nilaza fa afaka manampy azy amin’io raha­raha io. Nambarany tamin’ izany fa mitana toerana
ambony eto amin’ny firenena izy ary mahafantatra olona ambony amin’ny sehatra maro ihany koa. Nanonona anaran’olona mihitsy izy tamin’ izany nentiny nisolokiana. Niezaka nandresy lahatra ity lehilahy ity sady nitaky vola roapolo tapitrisa ariary nola­zainy fa hozaraina amin’ireo olona ambony nolazainy ireo.
«Mailo tamin’ny fomba firesak’io lehilahy io ilay vehivavy mpitondra fiangonana ka nampandre ny polisy avy hatrany. Natao ny vela-pandri­ka rehetra tamin’ny fotoana voatondro hanome­zana ny vola, tamin’ny zoma lasa teo. Voasambotra teny Anosy ilay lehilahy sy ny namany iray. Tratra ihany koa ny lehilahy roa sy vehivavy iray niray tsikombakomba tamin’izy ireo», araka ny tatitra voaray tamin’ny polisy. Nitohy teny Itaosy ny fisamborana nataon’ny polisy, tamin’ny sabotsy. Noentina natao famotorana ny lehilahy pasitera iray izay voalaza fa anisan’ny tompomarika
tamin’ity fisolokiana ity.
Vono olona tao anaty taksiborosy :: Naiditra am-ponja ny vadin’ilay lehilahy nanindrona antsy mpandeha